ဆလိုဗက်ကီး (SRO) ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ်ဦးကဆလိုဗက်ကီးတွင် SRO ကုမ္ပဏီနိုင်ငံခြားသားများအဘို့ကော်ပိုရေးရှင်း၏လူကြိုက်အများဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံတွေအတွက်ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှုကုမ္ပဏီဆင်တူသည်တွင် SRO က၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များအနေဖြင့်သီးခြားဥပဒေရေးရာ entity ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားများတစ်ဦးတွင် SRO အတွက်ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်
တွင် SROa"ကိုလီမိတက်မှုစိစစ်နှင့်အတူကုမ္ပဏီ" သို့ဘာသာပြန်ထားသောနိုင်သည့် "Spoloènos s ကိုRuèenímObmedzeným" ကိုဆိုလိုတာပါ။
အဆိုပါ SRO ကျန်းမာဖွံ့ဖြိုးဆဲစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းကိုရှာနေအသေးစားအလတ်စားဖို့အရွယ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
တစ်ဦးတွင် SRO အုပ်ချုပ်အဓိကဥပဒအကြာတွင်ပြင်ဆင်ချက်တွေနဲ့ 1991 ၏ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Code ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Code ကိုထိန်းညှိ:
ဆလိုဗက်ကီးအနောက်ဘက်သြစတြီးယားနဲ့ချက်သမ္မတနိုင်ငံတို့ကနယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ဗဟိုဥရောပကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, အရှေ့ဘက်တွင်ယူကရိန်း, ပိုလန်မြောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်တွင်ဆာငတ်မွတ်သိပ်။
1945 ထဲမှာကွန်မြူနစ်အုပ်စိုးမှုအောက်မှာတစ်ဦးဆိုဗီယက်ဂြိုဟ်တုဖွစျလာတဲ့အခါလိုဗက်ကီးယားအဲဒီနေ့က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ 1989 ၏ကတ္တီပါတော်လှန်ရေးကွန်မြူနစ်အုပ်စိုးမှုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဆလိုဗက်ကီးငြိမ်းချမ်းစွာနှစ်နိုင်ငံသို့အဲဒီနေ့ကဖျက်သိမ်းသောကတ္တီပါကွာရှင်းစဉ်အတွင်း 1993 အတွက်၎င်း၏လွတ်လပ်ရေးပေးခဲ့သည်။ အခြားတိုင်းပြည်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာတရားဝင် "စလိုဗကျသမ္မတနိုင်ငံ" ဟုခေါ်သည်။ ၎င်း၏နိုင်ငံရေးစနစ်ကတစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်တအိမ်တည်းစည်းဝေးပွဲကိုတစ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်အတူတစ်ဦး "ပါလီမန်သမ္မတနိုင်ငံ" အဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ ဆလိုဗက်ကီး 2004 အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
ယနေ့လိုဗက်ကီးယားမြင့်မားသောဝင်ငွေပျှမ်းမျှခြင်းနှင့်လူနေမှုအဆင့်အတန်းနဲ့အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးကိုအတော်ပင်။ ဆလိုဗက်ကီးစာနယ်ဇင်းလွတ်လပ်ခွင့်, အရပ်ဘက်လွတ်လပ်ခွင့်, ဒီမိုကရေစီနည်းကျရွေးကောက်ခံအစိုးရ, အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့်နှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာတိုင်းပြည်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်မြင့်မားသောအဆင့်ရရှိ။
တစ်ဦးကဆလိုဗက်ကီး (SRO) ကုမ္ပဏီအောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးများကိုကမ်းလှမ်း:
•အပြည့်အဝနိုင်ငံခြားရေးပိုင်ဆိုင်မှု: တစ်တွင် SRO အတွက်အစုရှယ်ယာအားလုံးနိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
•သီးသန့်လုံခြုံရေး: အမည်စာရင်းတင်သွင်းရှယ်ယာရှင်များထက် သာ. ကြီးမြတ်သော privacy ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ခွင့်ပြုထားပါသည်။
•တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များနှင့်တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: သာလျှင်တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်လိုအပ်ပါသည်အပြည့်အဝတွင် SRO ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦးတည်းသောဒါရိုက်တာဖြစ်နိုင်သူ
•အနိမျ့မြို့တော်: တစ်ခုချင်းစီကိုရှယ်ယာရှင် 1,000 ယူရိုတစ်နိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော်ဆီသို့ဦးတည်မှာအနည်းဆုံး 6,600 ယူရိုအထောက်အကူပြုရပါမည်။
•အီးယူအသင်းဝင်: လိုဗက်ကီးယားအီးယူတစ်လျှောက်လုံးဌာနခွဲရုံးဖွင့်လှစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများကို affording ဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
ဆလိုဗက်ကီး (SRO) ကုမ္ပဏီအမည်
တိုင်းတွင် SRO ပြီးသားလိုဗက်ကီးယားအတွက်မှတ်ပုံတင်ဥပဒေရေးရာ entity အားဖြင့်အသုံးမပြုတဲ့ကုမ္ပဏီအမည်ရွေးရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဦးကအဆိုပြုထားသောကုမ္ပဏီအမည်အားတက်မှ 10 နေ့ရက်ကာလအဘို့လျှောက်လွှာ၏ကြိုတင်မဲအတွက် reserved နိုင်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီအမည်အတိုကောက် "တွင် SRO" နဲ့အဆုံးသတ်ရပေမည်။
တစ်ဦးတွင် SRO အတွက်ရှယ်ယာရှင်များမှသာမိမိတို့၏ယူရှယ်ယာမြို့တော်၏တန်ဖိုးကိုအဘို့အထိုက်ဖြစ်ကြသည်။
တွင် SRO ရဲ့သကျတမျးအစဉ်မပြတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဓိကရှယ်ယာရှင်နှုတ်ထွက်သောအခါတွင် SRO ပျော်မထားဘူး။
•နှစ်ဦးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုရှယ်ယာရှင်များ (မကြာခဏအခြားနိုင်ငံအသင်းတစ်ခုဆောင်းပါးများခေါ်) အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးသည်။ ကုမ္ပဏီနှင့်၎င်း၏ရှယ်ယာရှင်များ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများကဤစာချုပ်ထဲမှာဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ ယင်းတွင် SRO အစားအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုစာချုပ်၏တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်ရှိပြီး အကယ်. တစ်ဦးဖောင်ဒေးရှင်းစင်းလုံးငှားကွပ်မျက်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ အသင်းအဖွဲ့များ၏စာချုပ်သို့မဟုတ်တိုက်မြစ်ကိုစင်းလုံးငှားဖြစ်စေသည့်စီးပွားရေးမှတ်ပုံတင်မည်နှင့်အတူတင်သွင်းသော "Notary လုပ်ရပ်" ဖြစ်လာသည့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်လက်မှတ်ပေါင်း authenticates သူတစ်ဦးသက်သေခံရှေ့နေအများပြည်သူများ၏ရှေ့မှောက်၌လက်မှတ်ထိုးထားသည်။
•တစ်ဦးကတရားဝင်လျှောက်လွှာကနဦးအစုရှယ်ယာရှင်များ၏အားလုံးသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ဥပဒေရေးရာကိုယ်စားလှယ်ကလက်မှတ်ရေးထိုးစီးပွားရေးမှတ်ပုံတင်မည်နှင့်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအသနားခံကုမ္ပဏီအမည်, မှတ်ပုံတင်ရုံးလိပ်စာ, စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများအကွာအဝေးနှင့်ကနဦးအရင်းအနှီးတန်ဖိုးပါဝင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးလိုင်စင်ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားကိုလိုအပ်လျှင်•, 1991 ၏ကုန်သွယ်ရေးဥပဒေစီးပွားရေးမှတ်ပုံတင်မည်ကနေကုန်သွယ်မှုလိုင်စင်ရယူဘို့လုပ်ငန်းစဉ်ပေးထားပါသည်။
•အရှယ်ယာရှင်များမဆိုသို့မဟုတ်ချိန်းချက်သောဒါရိုက်တာ (များ) နိုင်ငံခြားသားတွေလိုဗက်ကီးယား, ကာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနေထိုင်ဗီဇာအတွက်နေထိုင်အတွက်စီစဉ်နေသောဒေသခံရဲဌာနနှင့်အတူလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်လျှင်။
တစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးတွင် SRO ရှယ်ယာရှင်များမှာဖွဲ့စည်းရန်လိုအပ်ပါသည်လိုဗက်ကီးယား၏နေထိုင်သူများဖြစ်မလိုအပ်ပါနှင့်မည်သည့်တိုင်းပြည်များ၏နိုင်ငံသားများရှိနိုင်ပါသည်။ ဆွဲသွင်းပါဝင်အစိုးရကအတည်ပြုခင်သို့သော် Non-အီးယူသို့မဟုတ် Non-OECD ၏ရှယ်ယာရှင်များပြန်လည်သုံးသပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
သဘာဝပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကော်ပိုရိတ်အလောင်းတွေရှယ်ယာရှင်များဖြစ်လာပေမည်။ ခွင့်ပြုရှယ်ယာရှင်များအများဆုံးအရေအတွက်က 50 ဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးရှိသောပိုင်ရှင်တွေလိုဗက်ကီးယားအတွက်ခွင့်ပြုထားတဲ့ဆန်ခါတင်ရှယ်ယာရှင်များကို အသုံးပြု. သာ. ကြီးမြတ် privacy ကိုရှာခြင်းငှါနိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးတည်းသာဒါရိုက်တာတစ်ဦးအနည်းဆုံးအဆိုပါဝါးရှယ်ယာရှင်အများဆုံးကိုထိန်းချုပ်ဘို့သာဒါရိုက်တာအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရနိုငျယင်းတွင် SRO ဘို့လိုအပ်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာများလိုဗက်ကီးယားနေထိုင်ရန်မလိုပါနှင့်မဆိုတစ်ခြားနိုင်ငံတစ်ခုအနေဖြင့်နိုင်ငံသားများဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သျောလညျးကို non-OECD ၏သို့မဟုတ် Non-အီးယူဒါရိုက်တာများကြိုတင်ဒါရိုက်တာဖြစ်လာဖို့အစိုးရကအတည်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။
လိုအပ်သောအခွင့်အာဏာနိမ့်ဆုံးရှယ်ယာမြို့တော် 200,000 SKK (လက်ရှိ 6,600 ယူရို) ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရှယ်ယာရှင် 30,000 SKK (လောလောဆယ် 1,000 ယူရို) ၏နိမ့်ဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ရပေမည်။
ဆလိုဗက်ကီး၌ရှိသောကုမ္ပဏီဥပဒေနှင့်တာဝန်ရှိသူတဦးကသတိပေးချက်များကိုလက်ခံမယ့်မှတ်ပုံတင်ရုံးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်မှတ်ပုံတင်ရုံးအားလုံးအရေးကြီးသောကုမ္ပဏီစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများ, မှတ်ပုံတင်နှင့်မှတ်တမ်းများကိုသတင်းပို့ထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်စဉ်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ပြန်ချက်များဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းနှစ်ကုန်ကနေခုနစ်လအတွင်းမှာအခွန်အေဂျင်စီနှင့် Registry ကိုနှင့်အတူတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
အခြို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ကြီးမားသောကုမ္ပဏီများသည်သာလျှင်စာရင်းစစ်စာရင်းကိုင်အစီရင်ခံစာများ file ရန်လိုအပ်သည်။ အချို့လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့်, ပိုင်ဆိုင်မှုအရေအတွက်နှင့်ဝန်ထမ်းကန့်သတ်ကျော်လွန်စတော့ရှယ်ယာဖလှယ်အပေါ်စာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီများသို့မဟုတ်စာရင်းစစ်အကောင့်မှတ်တမ်းများ file ရမည်ဖြစ်သည်။ အသေးစားပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများအနေနဲ့စာရင်းစစ်အသုံးချမှမရှိကြပါဘူး။
အမြတ်အစွန်းအပေါ်ကော်ပိုရိတ်အခွန်နှုန်းကို 19% ဖြစ်ပါတယ်။
ပြန်လည်သုံးသပ်အတည်ပြုခံရဖို့အားလုံးလိုအပ်တင်သွင်းစာရွက်စာတမ်းများနှင့် Non-အီးယူများအတွက်နှစ်ပတ်အတွင်းအထိကြာသို့မဟုတ် Non-OECD ၏ဒါရိုက်တာဖို့မြျှောလငျ့။
ပြီးပြည့်စုံသောနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု, ကန့်သတ်တာဝန်ယူမှု, privacy ကို, တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားရေးမှူး, အနိမ့်ရှယ်ယာမြို့တော်နှင့်အီးယူအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နိုင်သူတဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တစ်လိုဗက်ကီးယားတွင် SRO ကုမ္ပဏီကဤအကျိုးခံစားခွင့်ပေးပါသည်။